Feature image for Falka Qandaraska (marka iibsadahu lacagta wada bixiyo ama helo qaab uu ku bixiyo hadhaaga)
Hubso inaad fahanto oo aad maarayn karto dhammaan kharashaadka aadka masuulka ahaan doonto. Ka sakow, lacag bixinta haftada bilaha ah ee iibsadaha, waxaad bixin doontaa caymiska mulkiilayaasha guryaha, cashuuraha dhismaha iyo kharashaadka hagaajinta iyo dayactirka sida lagu caddeeyay falka qandaraska. Badanka guryaha falka qandaraska waxaa loo iibiyaa “sida ay tahay” oo waxay u baahan karaan hagaajin wayn oo noqon kartaa masuuliyadaada. Iyaddoo ku xidhan shuruudaha qandaraaska, waad waayi kartaa guriga haddii aanad bixin hagaajinta . Bixinta daynta hadhsanayd